Shiinaha Yoga Dhiirigeliyayaashu waxay ku tababartaan Yoga Bangkok, soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Thailand | Biyoodka
Yoga Dhiirrigaliyayaasha Yoga Ku Tababbar Yoga Magaalada Bangkok, Thailand
Thailand waa mid ka mid ah meelaha ugu fiican adduunka ee lagu jimicsado yoga.
Maxay tahay inaad ugu tababbarto Yoga Thailand
Macallimiin kala duwan oo yoga xiddigo ah ayaa socodkooda ku dhex mara Thailand si la yaab leh oo joogto ah. Tiro ka mid ah macallimiin heer caalami ah ayaa xitaa ka dhigtay Thailand gurigooda! Tani waxay damaanad qaadeysaa inay jiri doonaan hodanka aqoon isweydaarsiyada yoga iyo dib u gurashooyinka laga kala dooran karo markasta oo aad qorsheyso safarkaaga.
Waxaa intaa dheer, macallimiintani waxay si lama filaan ah u abuurayaan bulshooyin yoga oo mashquul ah. Waxaad dareemi doontaa inaad gurigaaga joogtid booqashadaada ugu horreysa ee istuudiyaha yoga ee Thailand. Maaha wax aan caadi ahayn in fasallada ay u wada baxaan si wada jir ah marka la tababarto ka dib, iyo soo dhaweynta, deganaanshaha sabai sabai ee Thailand waxay khuseysaa yogis-keeda.
Halkan waxaa ah 3 oo ka mid ah Magaalooyinka Yoga ugu Fiican Yoga, iyo Xagee Lagu Tababbaraa:
Thailand runtii waa sixir, waxayna hoy u tahay goobo yoga oo ku baahsan dalka oo dhan. Waa kuwan wax yar oo ka mid ah kuwa yoga sixirka ah ee yoga yoga!
Mashquul Bangkok malaha maaha meesha ugu horeysa ee aad ka fikirto markay tahay inaad fuusho sariirtaada yoga, laakiin jahwareerkeeda ayaa ah sababta saxda ah ee dib loogula soo xiriiri karo tababarkaaga. In kasta oo caasimada dalku aysan bixin boosaska yoga ee xasilloon waxaad ka heli doontaa meelo kale, magaaladu waxay ku faantaa istuudiyo aad u fiican.
Bangkok dhexdeeda, macallimiintu way kacsan yihiin, istuudiyayaashuna way u heellan yihiin - inay u istaagaan fasal ka mid ah Yoga Elements oo loo tixgeliyo "istuudiyaha yoga ee ugu fiican Bangkok" ama Absolute Yoga inay kugu soo jiidaan Mango-ga weyn ka hor intaanay u ambabixin dibedda. Ama, haddii aad raadineyso dhaqan dhaqameed, ka raadi qulqulka Iyengar at Empower Yoga.
Biyo cadcad oo turquoise ah, calaacalaha qulqulaya iyo buuro dhaadheer oo qurux badan - jasiiradaha Thai waxay uqalmayaan dhammaan caannimadooda runtiina waa goob quruxsan oo lagu tababarto yoga. Waqtigu wuu gaabiyaa jasiiradaha, dabeecadda ayaa kugu hareeraysan, heerkulka diiranna wuxuu kaa caawinayaa inaad dabciso oo aad xasilooni dareento.
Waxaad ka heli kartaa istuudiyaha yoga yar iyo bulshooyinka fayoobaanta badankood jasiiradaha sida caadiga ah loo booqdo sida Ko Tao, Koh Lanta, iyo Koh Samui, laakiin mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee sida gaarka ah loogu booqdo yoga waa Koh Phangan.
Iyada oo leh muuqaal firfircoon oo firfircoon, Koh Phangan waxay hoy u tahay qaar ka mid ah xarumaha adduunka ee caanka ah oo ay ku jiraan xarunta adduunka ee Agama Yoga iyo The Sanctuary, oo ah goob dalxiis oo aad u qurux badan oo sidoo kale leh daaweyn detox iyo spa ah Haddii aad xiiseyneyso inaad ku dhammaystirto tababarkaaga yoga ee koonfurta Thailand, fiiri Jivani Yoga.
Ugu dambeyntii laakiin dhab ahaantii ugu yaraan waa "Rose of North" - Chiang Mai. Iyada oo ay ku nool yihiin qiyaastii 200,000, Chiang Mai waa magaalada ugu weyn waqooyiga Thailand. Buuraheeda xaaqan, biyo-dhaca badan, iyo jawiga deggan ayaa xaday qalbiyo badan.
Waxaan u maleynayaa Chiang Mai, oo ay weheliyaan waqooyiga intiisa kale, inay tahay meesha ugu fiican ee lagula xiriiri karo dabeecadda, dhaqankaaga yoga, iyo naftaada. Waxaa jira wax yar oo qof walba jooga - cuntada cajiibka ah, muuqaalka quruxda badan, nolosha habeenkii ee xiisaha leh, iyo muuqaalka daanka-daadinta - iyo bulshada caafimaadka iyo fayoobaanta adduunka ee kobcaya.
Ka qaybgal fasal kasta oo ka mid ah istuudiyaha ku dhow Old City, sida Namo Chiang Mai ama Wild Rose Yoga, waxaad isla markiiba dareemi doontaa inay ku soo dhaweynayaan macallimiinta yoga diiran ee ugu yeeray gurigan gaarka ah guriga. Nolosha dib u dhigista iyo xoojinta nolosha dabiiciga ah waxay woqooyiga ka dhigeysaa meel ku habboon oo diiradda lagu saaro dhaqankaaga.